Mareykanka oo War kasoo saaray duqeyn uu ka fuliyay Gobolka Jubbada Dhexe – Radio Baidoa
Mareykanka oo War kasoo saaray duqeyn uu ka fuliyay Gobolka Jubbada Dhexe
War-saxaafadeed ka soo baxay taliska Ciidamada Maraykanka ee qaarada Afrika ee loo yaqaano (AFRICOM) ayaa lagu faah faahiyey duqeyn dhinaca cirka ah oo uu Mareykanka ka fuliyey degmada Jilib ee Gobolka Jubbada Dhexe.
Qoraalka Africom ayaa lagu sheegay in Ciidamada Mareykanka oo kaashanaya Saaxiibadooda Soomaaliya ay 29/7/2020 duqeyn dhinaca cirka ah ka fuliyeen meel u dhow degmada Jilib ee Gobolka Jubbada Dhexe,isla markaana ay la beegsadeen Xubno ka tirsan Al-Shabaab.
Weerarkaas ayaa Mareykanka waxa uu sheegay inay ku dileen Xubin ka tirsan Al-Shabaab mid kalena ku dhaawaceen,isla markaana weerarkaasi duqeynta ah uu yahay mid ay ku taageerayaan Ciidamada Dowladda sida uu sheegay Madaxa arrimaha bulshada Mareykanka ee AFRICOM Chris Force Karns.
Sidoo kale Mareykanka ayaa sheegay in duqeyntaas qiimeyn ay sameeyeen lago ogaaday in aysan wax ku noqon dad rayid ah,hayeeshee Al-Shabaab war kasoo baxay ayaa waxaa lagu sheegay in duqeyntaas lagu dilay Saddex Carruur ah laguna burburiyay Guryo ay deganaayeen dad Shacab ah.
Mareykanka ayaa sanadkaan 2020 waxa uu kordhiyey weerarada dhinaca cirka ah uu ka fuliyo Soomaaliya,waxaana War kasoo baxay AFRICOM lagu sheegay in ay sii wadi doonaan howlgallada ay ka wadaan gudaha Soomaaliya oo ay kula dagaalamayaan Al-Shabaab & Daacish.
Hir-Shabeelle oo bilaabay qorsho looga hortagayo fatahaadaha
KG oo soo saartay digniin ku socota Kalluumeysatada